Nahoana Isika no Mivavaka hoe ho Tonga Anie ny Fanjakan’Andriamanitra?
1. Inona ilay vavaka malaza hodinihintsika?
BETSAKA no mahay an’ilay Vavaka Nampianarin’ny Tompo, na ilay hoe Rainay Izay any An-danitra. Inona no nolazain’i Jesosy tao? Nahoana no tena ilaintsika io vavaka io amin’izao?
2. Inona ny zavatra telo nasain’i Jesosy hangatahina rehefa mivavaka?
2 Hoy i Jesosy: “Mivavaha toy izao ianareo: ‘Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao! Ho tonga anie ny fanjakanao! Hatao etỳ an-tany anie ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra!’” (Vakio ny Matio 6:9-13.) Nahoana no nasain’i Jesosy nangataka an’ireo zavatra telo ireo isika?—Jereo ny Fanamarihana 20.
3. Inona no mila fantarintsika momba ny Fanjakan’Andriamanitra?
3 Efa nianarantsika fa Jehovah no anaran’Andriamanitra. Efa fantatsika koa ny sitrapony, izany hoe izay tiany hatao amin’ny tany sy ny olombelona. Nilaza koa anefa i Jesosy hoe: “Ho tonga anie ny fanjakanao!” Inona no dikan’izany? Mila fantarintsika aloha hoe: Inona io Fanjakan’Andriamanitra io? Inona no hataony? Ahoana no hanamasinany ny anaran’Andriamanitra?
4. Inona ny Fanjakan’Andriamanitra, ary iza no Mpanjakan’izy io?
4 Nanangana Fanjakana any an-danitra i Jehovah, ka i Jesosy no nataony Mpanjaka. Antsoin’ny Baiboly hoe Fanjakan’Andriamanitra izy io. “Mpanjakan’izay manjaka sy Tompon’ny tompo” i Jesosy. (1 Timoty 6:15) Mahavita zavatra betsaka sy tsara lavitra noho izay vitan’ny mpitondra olombelona izy, sady mahery lavitra noho izy rehetra mitambatra.
5. Aiza no misy ny Fanjakan’Andriamanitra? Aiza ny faritra hanjakany?
5 Niverina tany an-danitra i Jesosy, 40 andro taorian’ny nitsanganany tamin’ny maty. Tatỳ aoriana izy vao notendren’i Jehovah ho Mpanjakan’ilay Fanjakana. (Asan’ny Apostoly 2:33) Any an-danitra ny Fanjakan’Andriamanitra ary hanjaka eran-tany. (Apokalypsy 11:15) Izany no mahatonga ny Baiboly hiantso azy io hoe ‘fanjakana any an-danitra.’—2 Timoty 4:18.
6, 7. Inona avy no tsy mampitovy an’i Jesosy amin’ny mpanjaka olombelona?
6 Tsy mitovy amin’ny mpanjaka olombelona i Jesosy, satria “izy irery ihany no tsy mety maty.” (1 Timoty 6:16) Ny mpanjaka olombelona kosa ho faty ihany. Hanao zavatra tsara be dia be i Jesosy, ary haharitra mandrakizay izany.
7 Hanao ny rariny sy hahay hangoraka i Jesosy rehefa manjaka, satria hoy ny Baiboly: “Hitoetra eo aminy ny fanahin’i Jehovah, dia fanahy manome fahendrena sy fahiratan-tsaina sy torohevitra sy hery sy fahalalana, ary tahotra an’i Jehovah. Hahafaly azy ny fahatahorana an’i Jehovah. Tsy hitsara araka izay hitan’ny masony fotsiny izy, na hananatra araka izay ren’ny sofiny, fa araka ny rariny no hitsarany ny mahantra.” (Isaia 11:2-4) Tianao ve ny mpanjaka hoatr’izany?
8. Ahoana no ahafantarantsika fa hisy olona hiara-manjaka amin’i Jesosy?
8 Nifidy olona vitsivitsy i Jehovah mba hiara-manjaka amin’i Jesosy any an-danitra. Niteny tamin’i Timoty, ohatra, ny apostoly Paoly hoe: “Raha miaritra foana isika, dia ho mpanjaka hiara-mitondra aminy.” (2 Timoty 2:12) Firy anefa no hiara-manjaka amin’i Jesosy?
9. Firy no hiara-manjaka amin’i Jesosy? Oviana Andriamanitra no nanomboka nifidy azy ireo?
9 Efa hitantsika tany amin’ny Toko faha-7 fa nahazo fahitana ny apostoly Jaona. Hitany hoe misy 144 000 miara-manjaka amin’i Jesosy any an-danitra. Nilaza i Jaona fa “voasoratra teo amin’ny handrin’izy ireo” ny anaran’i Jesosy “sy ny anaran’ny Rainy.” Hoy koa izy: “Izy ireo no nanaraka foana ny Zanak’ondry [izany hoe i Jesosy] na taiza na taiza nalehany. Novidina avy teo amin’ny olombelona izy ireo.” (Vakio ny Apokalypsy 14:1, 4.) Iza ireo 144 000 ireo? Kristianina tsy mivadika izy ireo, ary nofidin’Andriamanitra “ho mpanjaka hitondra ny tany” hiaraka amin’i Jesosy. Hatsangana ho any an-danitra izy ireo rehefa maty. (Apokalypsy 5:10) Efa tamin’ny andron’ny apostoly i Jehovah no nanomboka nifidy an’ireo mpanjaka 144 000 ireo.
10. Ahoana no ahitana hoe tena tia antsika i Jehovah, rehefa nifidy an’i Jesosy sy ireo 144 000 ho mpanjaka?
10 Tena tia antsika i Jehovah matoa i Jesosy no nataony Mpanjaka, ary olombelona no nasainy hiara-manjaka aminy. Hahay hitondra i Jesosy satria fantany tsara ny mahazo antsika. Efa olombelona mantsy izy ary efa nijaly. Nilaza i Paoly fa “mahay mangoraka antsika amin’ny fahalementsika” i Jesosy, ary “efa notsapaina tamin’ny lafiny rehetra toa antsika koa.” (Hebreo 4:15; 5:8) Efa olombelona koa ireo 144 000, ka efa narary sady efa niady mafy tsy hanao ratsy. Azo antoka àry fa fantatr’i Jesosy sy ireo 144 000 ny zavatra tsapantsika sy ny olana mahazo antsika.
11. Nahoana no nasain’i Jesosy hivavaka ny mpianany hoe hatao any an-danitra anie ny sitrapon’Andriamanitra?
11 Nahoana no nasain’i Jesosy hivavaka ny mpianany hoe hatao any an-danitra anie ny sitrapon’Andriamanitra? Hitantsika tao amin’ny Toko faha-3 fa nanohitra an’i Jehovah i Satana Devoly. Mbola navelan’i Jehovah nipetraka tany an-danitra i Satana sy ireo anjely nivadika, na demonia, taorian’izay. Tsy ny anjely rehetra tany an-danitra àry no nanao ny sitrapon’i Jehovah, tamin’izany. Hianatra momba an’i Satana sy ny demonia isika ao amin’ny Toko faha-10.
12. Inona ireo zavatra miavaka roa resahin’ny Apokalypsy 12:10?
12 Milaza ny Baiboly fa vao lasa Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra i Jesosy dia niady tamin’i Satana. (Vakio ny Apokalypsy 12:7-10.) Misy zavatra miavaka roa resahin’ny andininy faha-10. Voalohany, nanomboka nitondra ny Fanjakan’Andriamanitra ka i Jesosy no Mpanjaka. Faharoa, noroahina avy tany an-danitra i Satana ka natsipy tetỳ an-tany. Efa tanteraka ireo zavatra ireo.
13. Lasa manao ahoana ny any an-danitra rehefa nesorina tany i Satana?
13 Milaza ny Baiboly fa faly be ny anjely tsara tany an-danitra, rehefa nesorina tany i Satana sy ny demoniany. Hoy ny Apokalypsy 12:12: “Mifalia ry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy!” Efa tena milamina sy miray saina izao ny any an-danitra, satria manao ny sitrapon’Andriamanitra daholo ny any.
Mihamijaly ny olona fa noroahina avy tany an-danitra i Satana sy ny demoniany. Kely sisa dia hifarana izany
14. Lasa manao ahoana ny fiainana eto an-tany rehefa natsipy tetỳ i Satana?
14 Lasa feno zavatra ratsy be dia be kosa eto an-tany. Natsipy tetỳ mantsy “ny Devoly sady tezitra mafy, satria fantany fa fohy ny fotoana ananany.” (Apokalypsy 12:12) Noroahina avy tany an-danitra i Satana, ary fantany fa kely sisa izy dia horinganina. Tena romotra àry izy ka ataony daholo izay hampikorontana ny fiainan’ny olona sy hampijaliana azy ireo.
15. Inona no tian’i Jehovah hatao amin’ny tany?
15 Tsy niova anefa ny fikasan’i Jehovah. Mbola tiany hatao paradisa ny tany, ary tiany hisy olona lavorary hiaina mandrakizay eto. (Salamo 37:29) Ahoana no hanaovan’ny Fanjakan’Andriamanitra an’izany?
16, 17. Inona no tian’ny Daniela 2:44 holazaina?
16 Hoy ny Daniela 2:44: “Amin’ny andron’ireo mpanjaka ireo, dia hanorina fanjakana tsy ho rava mandrakizay ilay Andriamanitry ny lanitra, ary tsy ho lasan’olon-kafa izany fanjakana izany. Hotorotoroin’izy io sy hofoanany ireo fanjakana rehetra ireo, fa izy kosa haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra.” Inona no dikan’io faminaniana io?
17 Voalohany, “amin’ny andron’ireo mpanjaka ireo” no hanomboka hitondra ny Fanjakan’Andriamanitra, izany hoe mbola hisy mpitondra olombelona amin’io fotoana io. Faharoa, haharitra mandrakizay ilay Fanjakana fa tsy hisy fitondram-panjakana hisolo azy. Fahatelo, hiady ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny fanjakana rehetra eto an-tany. Ny Fanjakan’Andriamanitra no handresy, ary izy irery no hitondra ny tany manontolo. Hiadana ny olombelona aorian’izay, satria fanjakana faran’izay tsara no mitondra.
18. Inona ilay ady ataon’ny fanjakan’olombelona amin’ny Fanjakan’Andriamanitra?
18 Ady ataon’ny fanjakan’olombelona amin’ny Fanjakan’Andriamanitra no atao hoe Hara-magedona. Inona no hitranga aloha kelin’izay? Hisy demonia hamitaka ny “mpanjakan’ny tany rehetra misy mponina, mba hanangonana azy ireo ho amin’ny adin’ilay andro lehiben’ilay Andriamanitra Mahery Indrindra.”—Apokalypsy 16:14, 16; jereo ny Fanamarihana 10.
19, 20. Nahoana isika no mila ny Fanjakan’Andriamanitra?
19 Nahoana isika no mila ny Fanjakan’Andriamanitra? Misy antony telo, fara fahakeliny. Voalohany, mpanota isika ka marary sy maty. Milaza anefa ny Baiboly fa hiaina mandrakizay isika rehefa ny Fanjakan’Andriamanitra no hitondra. Hoy ny Jaona 3:16: “Lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany lahitokana mba tsy ho ringana izay rehetra maneho finoana azy, fa hanana fiainana mandrakizay.”
20 Faharoa, be dia be ny ratsy fanahy. Betsaka ny olona mandainga, tsy manao ny marina, ary ratsy fitondran-tena. Tsy afaka manala an’ireny isika fa Andriamanitra kosa no hanao an’izany. Ho ringana izay zatra manao ratsy, amin’ny Hara-magedona. (Vakio ny Salamo 37:10.) Fahatelo, voafetra ihany ny zavatra vitan’ny fanjakan’olombelona, ary ratsy toetra sy tsy manao ny marina izy ireo. Tsy te hanampy ny olona hankatò an’Andriamanitra izy ireo. Hoy ny Baiboly: “Nanjakazaka tamin’ny namany ny olona ka nampiditra loza taminy.”—Mpitoriteny 8:9.
21. Inona no hataon’ilay Fanjakana mba ho tanteraka etỳ an-tany ny sitrapon’Andriamanitra?
21 Hanatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra etỳ an-tany ny Fanjakan’Andriamanitra, aorian’ny Hara-magedona. Hogadraina, ohatra, i Satana sy ny demoniany. (Apokalypsy 20:1-3) Tsy harary na ho faty koa ny olona. Ho afaka hiaina mandrakizay ao amin’ny Paradisa ny olona noho ny vidim-panavotana. (Apokalypsy 22:1-3) Hanamasina ny anaran’Andriamanitra koa ilay Fanjakana. Midika izany fa hanome voninahitra ny anaran’i Jehovah daholo ny olona, rehefa hitondra ny tany ny Fanjakan’Andriamanitra.—Jereo ny Fanamarihana 21.
OVIANA I JESOSY NO LASA MPANJAKA?
22. Ahoana no ahafantarantsika fa tsy lasa Mpanjaka i Jesosy tamin’izy teto an-tany, na tamin’izy vao natsangana tamin’ny maty?
22 Mbola tsy Mpanjaka i Jesosy tamin’izy teto an-tany, matoa ny mpianany nasainy nivavaka hoe: “Ho tonga anie ny fanjakanao!” Tsy tonga dia lasa Mpanjaka koa i Jesosy rehefa tafaverina tany an-danitra fa mbola niandry. Manaporofo an’izany ny tenin’i Petera sy Paoly taorian’ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty. Nilaza izy ireo fa tanteraka tamin’i Jesosy ny Salamo 110:1. Hoy i Jehovah ao amin’io faminaniana io: “Mipetraha eto ankavanako mandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao.” (Asan’ny Apostoly 2:32-35; Hebreo 10:12, 13) Oviana àry i Jesosy vao nataon’i Jehovah ho Mpanjaka? Oviana i Jehovah no nanangana an’ilay Fanjakany?
Hanao zavatra ny Fanjakan’Andriamanitra mba ho tanteraka etỳ an-tany ny sitrapony
23. a) Oviana i Jesosy no lasa Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra? b) Inona no ho hitantsika ao amin’ny toko manaraka?
23 Nijery ny faminanian’ny Baiboly ny Kristianina vitsivitsy ka nahafantatra mialoha hoe hiavaka ny taona 1914. Marina ny zavatra noeritreretin’izy ireo rehefa jerena izay nitranga nanomboka tamin’io taona io. Tamin’io i Jesosy no lasa Mpanjaka. (Salamo 110:2) Natsipy tetỳ an-tany i Satana, taoriana kelin’izay, ary efa “fohy ny fotoana ananany” izao. (Apokalypsy 12:12) Ho hitantsika ao amin’ny toko manaraka ny porofo hoe efa ao anatin’io fotoana io isika izao. Ho hitantsika koa fa efa kely sisa dia hanao zavatra ny Fanjakan’Andriamanitra mba ho tanteraka etỳ an-tany ny sitrapony.—Jereo ny Fanamarihana 22.
HEVITRA 1: TENA MISY NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA
“Ho tonga anie ny fanjakanao! Hatao etỳ an-tany anie ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra!”—Matio 6:9-13
Fanjakana any an-danitra izy io ary hanjaka amin’ny tany.
I Jesosy no Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra.
Hisy olona 144 000 hiara-manjaka amin’i Jesosy any an-danitra.
Fantatr’i Jesosy sy ireo 144 000 ny zavatra tsapantsika sy ny olana mahazo antsika.
HEVITRA 2: I JESOSY NO MPANJAKA TSARA INDRINDRA
“Araka ny rariny no hitsarany ny mahantra.” —Isaia 11:4
Nahoana no tena mety raha i Jesosy no Mpanjaka?
Ny mpitondra olombelona rehetra mbola maty ihany fa i Jesosy tsy ho faty mihitsy. Haharitra mandrakizay ny zavatra hataony ho antsika.
Mahavita zavatra betsaka sy tsara lavitra noho izay vitan’ny mpitondra olombelona izy, sady mahery lavitra noho izy rehetra mitambatra. Manao ny rariny sy mangoraka izy.
HEVITRA 3: HANATANTERAKA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA ILAY FANJAKANA
“Hanorina fanjakana tsy ho rava mandrakizay ilay Andriamanitry ny lanitra.”—Daniela 2:44
Inona no efa nataon’ilay Fanjakana? Inona no mbola hataony?
Nandroaka an’i Satana avy tany an-danitra sy nanipy azy tetỳ an-tany i Jesosy rehefa lasa Mpanjaka, tamin’ny 1914. Izany no mampikorontana ny fiainana sy mampijaly ny olona eto an-tany.
Horinganin’ny Fanjakan’Andriamanitra daholo ny fitondran’olombelona amin’ny Hara-magedona, satria tsy manao ny marina sady mampijaly olona.
Horinganina izay zatra manao ratsy.
Hanome voninahitra ny anaran’i Jehovah daholo ny olona, rehefa hitondra ny tany ny Fanjakan’Andriamanitra. Tsy hisy olona harary sy ho faty intsony koa.
Inona ny Fanjakan’Andriamanitra? (Fizarana 1)
Inona ny Fanjakan’Andriamanitra? (Fizarana 2)